आरामदायक हट टोडी रेसिपी Wh व्हिस्की वा रमको साथ! - व्यंजनहरु
एक कप चामलले कती बनाउँछ
के कुखुरा कोर्डन bleu नुस्खा संग सेवा गर्न
आलु म्यासमा के प्रयोग गर्ने
भुटेको बन्दकोबी र कीलबासाका साथ चाउचाउहरू
तपाईं कहिलेसम्म पोर्क सॉसेज उमाल्ने गर्नुहुन्छ
आरामदायक तातो टेडी रेसिपी
त्यहाँ जस्तो केहि छैन हट टोडी मौसम चिसो हुँदा तपाईंलाई न्यानो पार्न! ह्विस्की वा अन्य आत्मा, दालचीनी र सिट्रसको साथ मिसिएको, चिया वा बिना…। कस्टम-निर्मित हट टोडीको आफ्नै अनन्त आरामदायी स्वाद छ!
तातो पेय पदार्थ एप्पल साइडर वा स्पिंक एग्ग्नोग ल्याट्स चुस्नको लागि सँधै अद्भुत हुन्छ, यो बिदाको बेला हो, तातो टोड्सको लागि यो नुस्खा सबै तनावलाई पग्लिदिने कुरामा निश्चित छ।
रोटलको साथ ढिलो कुकर चिकन टर्टिला सूप
तातो टडी भनेको के हो?
तातो टडी एक पारम्परिक पेय हो जुन कहिलेकाँहि 'ग्रोग' को साथ भ्रमित हुन्छ। 'बच्चा' भन्ने शब्द बेलायती नियन्त्रणित भारतबाट आएको देखिन्छ, जहाँ खजूरका बोटको किण्वित सारबाट एक पेय बनाइएको थियो र यसलाई 'टेडी' भनिन्थ्यो।
हाम्रो उद्देश्यका लागि, तातो टडी भनेको केवल तातो पानी, मदिरा, दालचिनी, मह र कागतीको स्वादिष्ट मिश्रण हो। वा क्यानडामा कहिलेकाँ महको सट्टा म्याप्पल सिरप प्रयोग गरिन्छ!
कालो र डेकर कुरकुरा एन बेक रेसिपीहरू
यो ककटेल बनाउन गाह्रो छैन, र आराम गर्नको लागि उत्तम तातो ककटेल हुनुको साथसाथै यो चिसो र फ्लूको मौसममा पनि रमाइलो हुन्छ।
तातो टडीको लागि के मदिरा प्रयोग गर्ने
यो विधिले डार्क रमको लागि कल गर्दछ, जुन एकदम उत्तम संयोजन हो, तर हट टोडिज प्राय: ह्वास्की, बोर्बन वा ब्रन्डीसँग मिसाइन्छ। ब्रान्डी विशेष गरी चिसो दिनमा राम्रो छ, यसले तपाईंलाई न्यानो र टोस्ट गर्नेछ!
तपाईले छनौट गर्नुहुने कुरा तपाईको व्यक्तिगत स्वादमा निर्भर गर्दछ वा तपाईको हातमा के हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ!
कुनै राम्रो व्हिस्की (वा गाढा रम) प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयास गर्न केहि:
रम क्राकेन कालो स्पाइस गरिएको रम
मेकर्स मार्क एक मीठो ह्विस्की हो, त्यसैले तपाईं यसलाई चियाको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
कपर र किंग्स बुचरटाउन ब्रान्ड, यो सस्तो मूल्य बिन्दुमा राम्रो स्वाद हुन्छ।
स्थिर कुनै बेक कुञ्जी लाइम पाई
कसरी तातो टडी बनाउने
यो बनाउन सजिलो छ, केहि मिनेटमा तपाईंसँग सही पेय हातमा हुनेछ:
दुई कप कप मा वा दालचिनी स्टिक र लौंग थप्नुहोस् आयरिश कफी मगहरू । (थप तातो पेय पदार्थको लागि, कपहरू पहिले तातो पानीले कुल्ले।)
उबलते पानी जोड्नुहोस्। यदि चिया प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब थप्नुहोस्।
मह, आत्मा र अन्य सामग्री थप्नुहोस्, मह भंग नभएसम्म हलचल गर्नुहोस्।
निम्बूका स्लाइसहरूसँग गार्निश गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्!
एक मात्र शुद्ध आरामको कप लिनको लागि यसले लिन्छ! यसलाई स्विच गर्न र यस पेयमा विविधताहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् वा पाहुनाहरूलाई उनीहरूको विशेष कन्कोक्सनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनुहोस्। प्रयास गर्न को लागी केहि भिन्नताहरु:
भनिला एक्स्ट्र्याक्ट (वास्तविक सम्झौताको लागि जानुहोस्, नक्कल भ्यानिला होइन ... र केवल एक वा दुई ड्रप प्रयोग गर्नुहोस्)
ग्रेटेड वा काटिएको अदुवा
चियाका विभिन्न विभिन्न स्वादहरू जस्तै ट्रिपल बर्गामट अर्ल ग्रे, फल चिया, इत्यादि।
त्यहाँ धेरै संभावनाहरू छन् जब यो अनुकूलन-निर्मित हट टोडी सिर्जना गर्ने आउँदछ, त्यसैले लजालु नहुनुहोस्, केहि फरक विकल्पहरू प्रयास गर्नुहोस्।
के कुखुरा कोर्डन bleu संग जान्छ
रमाईलो गर्न को लागी पेय पदार्थ
होममेड एप्पल साइडर - स्वादिष्ट स्पाईड एप्पल पेय
पम्पकिन स्पाइस लाट्टे - स्टारबक्स भन्दा राम्रो
आयरिश कफी - महान खाना पछि सिपर!
स्पिक्ड एग्ग्नोग लट्टे - एक क्लासिक मा स्वादिष्ट मोड़
आरामदायक तातो टडी
तयारी समय१० मिनेट कुक समयदुई मिनेट कुल समय१२ मिनेट सर्भिंगहरूदुई ककटेल लेखकहोली निल्सन मौसम चिसो लाग्दा तपाईंलाई तातो पार्ने जस्तो तातो ताडी जस्तो केहि छैन! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई कप उबलते पानी वा तातो चिया
▢१ चम्चा मह
▢। औन्स अँध्यारो रम वा व्हिस्की वा बौर्न
▢दुई चम्मच कागतीको रस
▢दुई दालचिनी स्टिक
▢दुई स्लाइसहरू कागती
दालचीनी स्टिकहरू र दुईवटा मगमा लौंगहरू थप्नुहोस्।
उबलते पानी पोख्नुहोस् र ठाडो २- minutes मिनेट दिनुहोस्।
मह, रम र निम्बूको रस मा चलाउनुहोस्। निम्बूका स्लाइसहरू थप्नुहोस् र सेवा गर्नुहोस्।
वैकल्पिक: चाहिएको खण्डमा चिया झोलाहरू प्रत्येक मगमा जोड्न सकिन्छ। करीव minutes मिनेट पछाडि चिया ब्यागहरू हटाउनुहोस् र खारेज गर्न दिनुहोस्।
रम ह्विस्की वा बौर्नको साथ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
क्यालोरिज:१2२,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:१g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:१g,सोडियम:१मिलीग्राम,फाइबर:दुईg,चिनी:9g,भिटामिन सी:6मिलीग्राम,क्यालसियम:43मिलीग्राम,फलाम:१मिलीग्राम
कीवर्डतातो टडी कोर्सपेय पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।